Football Khabar » मेस्सीलाई ब्राजिलका गोलकिपरको ‘रातो बत्ती’ !
मेस्सीलाई ब्राजिलका गोलकिपरको ‘रातो बत्ती’ !
ब्राजिलमा जारी कोपा अमेरिका फुटबलमा नेपाली समयअनुसार भोलि (बुधबार) बिहान सेमिफाइनल खेलमा आयोजक ब्राजिल र पाहुना टिम अर्जेन्टिना खेल्दैछन् । खेल बिहान ६ः१५ बजेबाट सुरु हुनेछ । दुवै टोलीमा यो समयका स्टार खेलाडीहरू भएकाले यो खेल निकै रोमाञ्चक हुनेमा दुईमत छैन । अर्जेन्टिना सेमिफाइनल पुग्दासम्म मात्रै १ गोल गरेका मेस्सीले भोलि ब्राजिलविरुद्ध गोल गर्न सक्लान् कि नसक्लान् ? यो कुरा धेरैको ध्यानमा हुनेछ । जारी प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका ब्राजिलका पहिलो रोजाइका गोलकिपर एलिसन बेकरले भोलि अर्जेन्टिनी फरवार्डलाई कसरी रोक्लान् ? यो हेर्न बाँकी छ । तर, यसअघि पनि एलिसनले मेस्सीलाई बार्सिलोनाको जर्सीमा पटक–पटक निराश बनाएको इतिहास छ ।
तर, खेलअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एलिसनले भने अर्जेन्टिनाविरुद्धको खेल र मेस्सीबारे धारणा राखेका छन् । उनले अर्जेन्टिना र त्यसमा पनि मेस्सीविरुद्ध खेल्नु निकै कठिन हुने भए पनि आफूले मेस्सीविरुद्ध कुनै गल्ती नगर्ने बताएका छन् । उनले यस प्रतियोगितामा आफूहरूलाई गल्ती गर्ने कुनै छुट नभएको धारणा राखेका छन् । ‘मलाई मेरो टिममाथि विश्वास छ । मेरो काम र मेहनतमा म उत्तिकै विश्वास राख्छु । यस प्रतियोगितामा मैले यहाँसम्म आउँदा सबथोक दिएको छु । बाँकी खेलमा म अझै राम्रो गर्ने कोसिस गर्नेछु,’ एलिसनले भनेका छन्, ‘हामी अर्जेन्टिनालाई हराएर जसरी पनि फाइनल पुग्न चाहन्छौं । उनहिरूविरुद्ध कसरी खेल्नुपर्छ, हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ ।’
विगतमा इटालियन रोमा र हाल इंग्लिस क्लब लिभरपुल दुवै क्लबबाट स्पेनिस बार्सिलोनाको जर्सीमा मेस्सीलाई पटक–पटक निराश बनाएका एलिसन यसपटक मेस्सीलाई उस्तै पीडा दिने दाउमा छन् । एलिसनले मेस्सीको तारिफ गर्दै उनलाई रोक्न आफू तयार रहेको बताए । उनले मेस्सीजस्ता खेलाडीविरुद्ध खेल्न पाउँदा अर्कै चुनौती हुने र त्यसपछिको सफलतामा मज्जा मिल्ने बताए । ‘हामी एक बलियो टिमविरुद्ध खेल्न गइरहेका छौं । त्यसमा पनि अर्जेन्टिनी टिममा मेस्सीजस्ता विश्वकै उकृष्ट खेलाडी छन्,’ एलिसनले भने, ‘तर, यो खेलमा मलाई मेस्सीविरुद्ध गल्ती गर्ने छुट कदापि छैन । मेस्सीलाई रोक्न म सक्दो प्रयास गर्नेछु । मलाई थाहा छ, यो खेल मेरा लागि ठूलो परीक्षा हुनेछ ।’
प्रकाशित मिति १७ असार २०७६, मंगलवार १५:४६